Fitotoana vy sy fantsom-by
SC-1605 Stainless Steel Perforated lavaka famonoana rano
Ity fantsom-baravarankely tsy misy fangarony ity dia natao mora kokoa noho ny endrika V ny fantsona miendrika U noho ny endrika V nentim-paharazana. Ny lalàm-baravarana dia manome alalana rehefa mametraka ny gratings. Mora ny mametraka azy. Ary aorian'ny fametrahana azy dia mampiseho lavaka kely toradroa fotsiny ny tany. .Ny sakany ivelany dia mety ho 100mm, 150mm, 200mm, 250mm hatramin'ny 300mm.
SC-1603 Rano matevina miaraka amin'ny frame
Ny fantsom-by vy tsy misy fangarony dia vita amin'ny tsipika mitondra bar sy hazo fijaliana arakaraka ny filaharana fanenomana vy vita amin'ny vy, amin'ny alàlan'ny tsindry mafy amin'ny welder fanoherana nohamafisin'ny fanapahana, fisisihana, fanokafana, ny fizotran'ny hidy toy ny fanodinana ary ny fitakian'ny mpanjifa vita vokatra.
Handrail amin'ny vy mahery, Takelaka fototra Handrail, Tohatra Handrail Bracket, Fametahana Handrail mitsangana, Handrail vy tsy miova, Handrails,